एनआरएन चेकमा डा. खड्का - Damak No.1 Online Patrika
एनआरएन चेकमा डा. खड्का
चेक,१६ भदौ । गैरआवासीय नेपाली संघ चेक रिपब्लिक ( एनआरएन )को अध्यक्षमा डाक्टर चिरञ्जिबी खड्का चुनिएका छन् । आज सम्पन्न पाँचौ अधिबेशनले डा. खड्काको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति सर्वसम्मत चयन भएको हो । अधिबेशनले संघको आइसिसी सदस्यमा भने क्षेत्रबहादुर अधिकारी चयन भएका छन् ।
निर्वाचित समितिको महिला उपाध्यक्षमा एञ्जिला सिंह क्षेत्री (थापा), उपाध्यक्षद्धयमा छविलाल कँडेल र प्रेम खरेल चयन हुनभएको छ भने महासचिबमा विनोद ढकाल, सचिबमा पूर्णबहादुर बोहोरा, सहसचिवमा गोपाल बस्नेत, कोषाध्यक्षमा गिरीप्रसाद कँडेल, सहकोषाध्यक्ष विष्णु महत चयन भएका छन् । यसैगरि समितिको महिला संयोजकमा अनु कार्की, युवा संयोजकमा नवीन न्यौपाने पनि सर्वसम्मत चयन भएका छन् ।
त्यसैगरि समितिका सदस्यहरुमा सरुना बज्राचार्य, बेजामिन रायमाझी, दुर्गाप्रसाद अर्याल, सुजन देवकोटा, चक्रबहादुर रायमाझी, अनिलकुमार कार्की र गौरब आयार्च सर्वसम्मत चयन भएको जनाईएको छ ।
अधिबेशनको एनआरएन युरोपका संयोजक शिवकुमार बरुवालले उद्धघाटन गरेका थिए । सो अवसरमा संयोजक बरुवालले नेपालमा गएको महाभुकम्पका बेला चेक रिपब्लिक एनआरएनले पुरयाँएको सहयोगको चर्चा गरेका थिए ।
उनले एनसिसी चेकमा बैदेशिक रोजगारीमा आएकाहरुको समस्या समाधानका लागि आइसीसीले युरोप क्षेत्रका लागि छुट्टै बैदेशिक राहत कोषको स्थापना गर्न लागेको पनि जानकारी दिए ।
सो अवसरमा उनले यहि अक्टोबर १५ देखि १७ सम्म काठमाण्डौमा हुन लागेको संघको नवौं विश्व सम्मेलनमा सहभागी हुन आग्रह समेत गरेका थिए । उनले एनआरएनको उद्देश्यलाई अझ शसक्त ढंगले अगाडी बढाउन आसन्न सम्मेलनमा आइसिसीको सचिवमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरे । अधिबेशनमा एनआरएन चेकका पूर्व अध्यक्ष जितेन्द्र रायमाझीको समेत उपस्थिति रहेको थियो । महासचिब किशोर रायमाझीले सञ्चालन गरेका थिए ।
तिज विशेष कार्यक्रम
सो अवसरमा नेपालीहरुको मौलिक पर्व तिजको अवसरमा महिला दिदीबहिनीहरुलाई सामूहिक दर खुवाउने कार्यक्रम समेत सम्पन्न भएको थियो भने नेपालका कविले एकल कबिता बाचन गरेका संघका नवनिर्वाचित महसचिव बिनोद ढकालले जानकारी दिए